मिडिया > जर्नल फोकस फोकस > पत्रिका फोकस यीशु 2019-01 > ख्रीष्ट तपाईं मा बस्नुहुन्छ!
जबसम्म येशू तपाईंमा पवित्र आत्माको मार्फत बस्नुहुन्छ, तपाईंसँग केवल एउटा बोलावट छ, एउटा उद्देश्य र एक लक्ष्य: तपाईंको जीवन र तपाईंको सम्पूर्ण व्यक्तित्व येशूमा कुनै बाधाबिना र बिना शर्त उपलब्ध गराउन। येशूले आफ्नो उत्तराधिकार शुरू गर्नुभयो।
मेरो लागि आदर्श मेरो जीवनको हरेक क्षेत्रमा सही हुँदैन। मेरा सबै कामहरू येशूमा विश्वासको आधारमा हुनुहुन्न जो ममा हुनुहुन्छ। हामी कारण र सृष्टिको कथामा कारण पाउँछौं।
मैले आफैंलाई अनुभव गर्ने र मेरा आफ्नै आमाबाबुबाट आफ्नै जीवन बिताउने इच्छा विरासतमा पाएँ। परमेश्वरसंगको जीवनमा हामी प्रेम, सुरक्षा, मान्यता र स्वीकृति पाउँछौं। येशूसँगको व्यक्तिगत र घनिष्ट सम्बन्ध र पवित्र आत्माको अभाव बिना, एक अभाव उत्पन्न हुन्छ र निर्भरतामा डोर्‍याउँछ।
मैले मेरो भित्री शून्यतालाई विभिन्न लतहरूले भरिदिएँ। मेरो इसाई जीवनमा लामो समयसम्म, म विश्वास गर्दछु कि पवित्र आत्मा एक शक्ति हुनुहुन्छ। मैले यो शक्ति प्रयोग गरें र मेरो लतलाई हटाउन वा ईश्वरीय जीवन बिताउन कोसिस गरेँ। मेरो ध्यान सँधै केन्द्रित हुन्थ्यो। म मेरो व्यसनाहरू र आफैंलाई काबू गर्न चाहन्छु। राम्रो मनसायको साथ यो लड फाईदा थियो।
ख्रीष्टको प्रेमलाई चिन्नुहोस्
मेरो प्रश्न हो: मलाई के गर्न पवित्र आत्मा चाहिन्छ? ख्रीष्टको प्रेम बुझ्नको लागि! ख्रीष्टको प्रेमको ज्ञानको यस्तो नतिजा के हुन्छ जुन सबै ज्ञानलाई भन्दा पर जान्छ? ख्रीष्टको अतुलनीय प्रेमलाई जानेर म, जो मभित्र बसिरहेको छु, येशू मार्फत परमेश्वरको पूर्णता पाउँदछु!
मैले यो महसुस गरिसकेपछि, म मेरो सबै समस्याहरू, लतहरू र आफ्ना सबै कमजोरीहरू येशू समक्ष ल्याउँदैछु र भन्छु: «म यो गर्न सक्दिन, म यी सब आफ्नै जीवनबाट बाहिर निकाल्न असमर्थ छु। तपाईं संग मिलन मा येशू र तपाईं मार्फत म मेरो लत हटाउन सक्षम छु। म तपाईंलाई उनीहरूको ठाउँ लिन चाहन्छु र म तपाईंलाई मेरो जीवनमा स्वतन्त्रताको वंशानुगत resolveण समाधान गर्न अनुरोध गर्दछु।
उहाँ तपाईंमा रहनुहुन्छ र तपाईं आफैले उहाँमा पूरा हुन दिनुहुन्छ भन्ने तथ्यको लागि बारम्बार परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। तपाईंको कृतज्ञताका लागि धन्यवाद, यो महत्त्वपूर्ण तथ्यले तपाईंलाई आकार दिँदैछ!